Dadka reer Afgaanistaan ​​ayaa muujinaya calanka qaranka iyagoo xusaya
Home Warar-ka Dunida Dadka reer Afgaanistaan ​​ayaa muujinaya calanka qaranka iyagoo xusaya maalinta xorriyadda
Dadka reer Afgaanistaan ​​ayaa muujinaya calanka qaranka iyagoo xusaya maalinta xorriyadda
People carry Afghan flags as they take part in an anti-Taliban protest in Jalalabad, Afghanistan August 18, 2021 in this screen grab taken from a video. Pajhwok Afghan News/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT
Dadka ku nool Afgaanistaan ​​ayaa isugu soo baxay waddooyinka si ay u xusaan maalinta xorriyadda dalka, oo xusaysa heshiiskii 1919 -kii ee soo afjaray xukunkii Ingiriiska.
Kooxda Talibanka oo dalka qabsatay Axaddii, ayaa u dabaaldageysa maalinta xorriyadda iyagoo ku dhawaaqay inay garaaceen Mareykanka.
Ugu yaraan laba qof ayaa dhimatay ka dib markii Taliban ay rasaas ku fureen dad u dabaaldegayay maalinta xorriyadda magaalada Asadabad ee gobolka Kunar, goobjoogayaal ayaa u sheegay Al Jazeera. Dhacdadan ayaa dhacday kadib markii xubin ka mid ah dadkii u dabaaldegayay maalinta uu toorey ku dhuftay dagaalyahan ka tirsan Daalibaan, taasoo keentay in Taliban ay rasaas ku furaan.
Magaalada Jalalabad, dagaalyahanada Daalibaan ayaa rasaas ku riday dad lulayay calanka Afgaanistaan ​​intii lagu jiray dabaaldegga maalinta xorriyadda, waxaana ku dhaawacmay nin iyo wiil dhalinyaro ah.
Previous articleKiiskii ugu horreeyay ee COVID ayaa laga soo sheegay Tokyo 2020 Paralympic village
Next articleSamafale Cabdimaalik Muuse Coldoon xabsiga loo taxaabay kiisas xasaasi ah